SPY202 - OMG WiFi Spy Hidden 5-USB Port Charger Camera misy detection Motion, Loop Recording ary antso an-tariby - Vahaolana OMG
【Jery lavitra an-tariby lens Sarin-tsary tsy hita maso misy zoro 90 degre no namboarina tao amin'ity Kamera mpanaingo USB wifi ity. Azonao atao ny mampiasa azy ho toy ny tobim-pamandrihana amin'ny birao, ary koa amin'ny fakantsary. 1080P / 720P / 640P Resolution Ratio dia azo ahitsy amin'ny tanana araka ny toetoetran'ny tamba-jotra. Raha vantany vao mifandray amin'ny wifi ity fakantsary tsy misy tariby ity dia azonao atao ny manara-maso mora foana ny tranonao, trano fitahirizanao na fivarotana anao. Tonga lafatra ho an'ny filaminana an-trano sy izay rehetra tianao.
【Alarm Detection Motion】 Rafitra hita maso mihetsika azo tsapain-tanana miaraka amin'ity fakantsary charger USB ity. Raha vao voamariky ny fizahana hetsika dia hahazo ilay fampandrenesana amin'ny findainao ianao. Izy io koa dia maka sary ary mitahiry amin'ny APP an'ny mpampiasa ho azy, tsy ho diso anjara na fotoana mampientam-po ianao. Ny halaviran'ny fizahana fihetsiketsehana dia mety hatramin'ny 9.8ft.
【Fampandraketana Micro SD & Fanoratana Loop op Ny fakan-tsary dia manohana karatra fahatsiarovana hatramin'ny 64GB (tsy tafiditra). Azo apetraka ho an'ny firaketana ny fizahana hetsika, firaketana horonantsary 24 ora ary fandraketana horonantsary mandalo fotoana. Izy io koa dia manohana ny firaketana loop. Rehefa feno ny karatra SD dia hamerina azy ho azy ilay rakitra tranainy indrindra. Inona koa no ahafahanao mijery mivantana ny rakipeo amin'ny APP izay voatahiry ao anaty karatra sd fa tsy mamoaka ny karatra sd.
【Seranan-tsambo maro-USB Port Port 5-USB dia misy mifanentana lehibe izay afaka manafatra fitaovana USB marobe miaraka amin'izay koa mba hanomezana fahafaham-po ny fangatahanao hery hiantohana. Ny tariby herinaratra 4.7 ft dia lava ampy ahafahan'ny charger hahatratra lavitra kokoa. Tsy fakan-tsary kely fotsiny izy io, fa tobin-tsolika famenoana tonga lafatra ihany koa.
Ratsy fanapaha-kevitra: 1080P / 720P / 640P
Motion Detection Camera Shooting: Lamina mivantana 3 metatra
Karazana karazana: Micro SD Card
Karatra fahatsiarovan-tena be indrindra: 64GB
Player Software: KM PLAYER / MX PLAYER / VLC
Fitaovana finday finday: IOS / Android
Firy ny cameras ahafahan'ny APP mifandray amin'ny: 8
Firy amin'ny finday ny camera no mifandray amin'ny fotoana mitovy: 4
Parameter teknika USB Charger
DC ho an'ny USB: 5V
DC ho an'ny USB: 0.5A*1/1.0A*2/2.1A*2
6063 Total Views 1 Views Today